Nidaamka ballanqaadka 5:
Balanqaad daacadnimo ganacsi
1.Shirkaddayadu waxay si dardar leh u xoojineysaa dhismaha sumcadda iyo is-edbinta, si adag u adeecdaa sharciga ku saabsan ilaalinta xuquuqda macaamiisha iyo danaha, si dhab ah u fuliya waajibaadka hawlwadeennada ganacsiga, si firfircoon u siidaayaan ballanqaadka ganacsiga si niyad wanaag ah, waxay sugaysaa tayada badeecadaha iyo adeegyada, oo jaangooya ganacsiga iyo hab-dhaqanka adeegga;
2.Si loo hubiyo tayada badeecadaha ganacsiga, nidaamka adeegga dhawaaqa. Samaynta diiwaannada badeecada iyo kobcinta wacyiga bulshada iyo sumcadda;
3.Waxaan si adag u hirgalin doonnaa nidaamyada shaacinta macluumaadka iyo warbixinnada sannadlaha ah, oo aan wanaajin doonno maaraynta heerka deynta.
4. U fiirso dhismaha dhaqanka hufnaanta si loo xoojiyo sumcadda iyo hagidda ilaalinta xuquuqda macaamiisha.
Sameynta nidaamka qiimeynta bulshada iyo nidaamka qiimeynta
1.Waxaan hirgaliyaa nidaamka booqashada macaamiisha, qaybta adeegga macaamiisha ayaa sameeya ra'yi ururinta booqashada macaamiisha caadiga ah, waxay uruurisaa fikradaha iyo talooyinka macaamiisha, waxayna dhistaa faylalka qancinta macaamiisha. Haddii dhibaatooyin la helo, xalli waqtiga, isla markaana wax ka beddel dhab ah ku samee iibka iyo shaqaalaha adeegga khuseeya;
2.Waxaan si aqli leh u aqbalnaa kormeerka bulshada iyo aragtida bulshada, si firfircoon u dhagaysanaa fikradaha iyo talooyinka bulshada, oo si firfircoon ayaan u fulinnaa howlaha qiimeynta iyo qiimeynta bulshada.
Samee nidaamka badeecad iyo adeeg tayo leh oo raad-raac leh
1. Shirkaddayada ayaa iibisa badeecada, Adeegsata bakhaarka iyo nidaamka maaraynta barnaamijyada iibka software si ay u mideyso qoondaynta, tallaabada kormeerka tayada ee baaritaannada tallaabada ah si looga hortago in dhammaan saamaynta ay ku yeelanayso tayada badeecadda ay dhacdo;
2. Shirkadda waxay leedahay nidaam adeeg iib ah oo dhammaystiran ka dib, waxay dejisay nidaamka guud ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka tayada badeecada, waxayna hirgalisay habka maaraynta ee marka hore la tacaalidoono ka dibna mas'uuliyadeeda qaado. wax ka qabashada xaalada iyo falanqaynta dhibaatada qaab qoraal ah, oo si cad u qaybinta mas'uuliyadaha si looga fogaado soo noqnoqodka dhibaatooyinka la midka ah.
Samayso nidaam lagula xisaabtamo soo iibsiga
1. Shirkaddayada si adag ayey u maareyneysaa tayada hawsha soo iibsiga, waxayna u gudbineysaa nidaamka tayada iyo shuruudaha nidaamka bey'adda ee shirkadeena alaab-qeybiyeyaasha, waxayna u magacaabeysaa alaab-qeybiyeyaal u qalma si ay u xakameeyaan tayada badeecada meesha laga keenay.
2.Maxkamad xisaabeedkaSupplier, sameynta aaladda dib-u-eegista sahayda alaabada, kormeerka warshad, tijaabada alaabada, tijaabada badeecada si loo diido agabka ceyriinka.
Samayso isla xisaabtan
1. Shirkaddayada ayaa magacaabaya habka is-kormeerka, waax kasta waxay sameyneysaa nidaam kormeer u gaar ah, waxay ku waddaa kormeerka iyo is-hagaajinta dhibaatada.
2. Kooxda wax iibinta kadib waxay isugeyn doonaan oo ay la xisaabtami doonaan waaxyada ay khusayso wixii dhibaatooyin ah ee ka yimaada.